मोहिको नियमित सेवनले हुन्छ ठूलो फाइदा, अमृत समान खान आजबाट नै सुरु गर्नेकी ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
मोहिको नियमित सेवनले हुन्छ ठूलो फाइदा, अमृत समान खान आजबाट नै सुरु गर्नेकी ?
काठमाडौ – मोहि स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्गका लागि पनि उतिकै फाइदा जनम मानिन्छ । यो स्वादमा निकै मिठो हुनेगर्दछ । मोहि प्राय मानिसहरुले गर्मी मौसममा पिउने गरिन्छ ।
अधिकांशले मोहि र लस्सीको सेवन निकै रुचाउने गर्दछन् ।मोहि स्वादिलो लाग्छ र शरीरमा शीतलता पनि प्रदान गर्छ ।मोटोपना अधिक हुँदा मोहिमा नून मिलाएर पिउनु फाइदाजनक हुन्छ । पटक(पटक बाडुल्की लाग्ने समस्या रहेमा मोहिमा एक चम्मच अदुवाको पाउडर मिलाएर सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
सौन्दर्य समस्याको लागि मोहि निकै फाइदाजनक चीज हो ।यसको साथै गुलाबको जरालाई मोहिमा पिसेर अनुहारमा लगाउँदा डन्डीफोरको समस्या कम हुन्छ ।५- यदि तपाई अत्यधिक तनावबाट गुज्रिनु भएको छ । शरीरको कुनै पनि भागमा पोल्लेको छ भने तुरुन्त मोहि लगाउँदा आराम मिल्छ । कुर्कुच्चा फाट्ने समस्या हुँदा मोहिको सेवन लाभदायिक मानिन्छ ।